यी हुन् जति चोट लागेपनि नरुने अचम्मको बालक – Saurahaonline.com
यी हुन् जति चोट लागेपनि नरुने अचम्मको बालक
एक चार बर्षको बच्चा जसलाई रुन पनि आउदैन । सुन्दैमा तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि रुदै नरुने बच्चा कस्तो होला ? चार बर्षमा त बच्चाहरु आमाले रिसाए पनि रुन्छन तर यो बच्चालाई भने आमाले रिसाए त के चोटपटक लागेपनि रुदैन उल्टै हास्छ ।
हो यो बच्चाको नाम हो डेक्सटर काहिल । उनी एउटा डांस कलासमा डांस गरिरहेका थिए त्यतिकैमा उनि लडे र उनको खुट्टा भाचियो तर पनि उनी रोएनन् । खासमा भन्ने हो भने डेक्सटरलाई जेनेटिक डिसअर्डर छ । जसको कारण उनलाई पिडाको महशुस हुदैन र आशु झर्दैन । आफ्नो खुट्टा भाचिन सम्म पनि उनलाई पिटिक्कै दुख्दैन, आखिर के रहेछ त यो जेनेटिक डिसअर्ड ?
डाक्टरहरु का अनुसार उनमा हेरीडेटरी सेंसरी ऑटोनॉमी न्यूरोपैथी टाइप ४ भन्ने डिसअर्डर रहेछ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार यस्तो समस्या विश्वमा करिब १३ करोड मान्छे मध्ये एकजनामा मात्र हुन्छ, यो दुर्लभ घटना मानिन्छ ।
यस्तो समस्यामा पिडाको महशुस नहुने हुदा यो एकदमै खतरनाक सावित हुन सक्छ । बिरामीको भित्री शरिरमा के भइरहेको छ बाहिरबाट हेरेर थाह हुदैन कारण यो हो कि बिरामीलार्इ पीडाको महशुस नै हुदैन । एजेन्सी